indow Registry Analysis Part (2) (Window Forensics)
User တစ်ယောက်ဟာ Window ကိုစတင်အသုံးပြီဆိုတာနဲ့ သူလုပ်ဆောင်သမျှအားလုံးကို Registry ကနေမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
File Open activities
Network Connecting activities
portable device ချိတ်ဆက်မှု စတာတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
အချို့သော အချက်အလက်တွေကတော့ Window Shut Down ချတာနဲ့ ပျောက်သွားပါတယ်။ Every things LeaveaTrace.
မှတ်သားထားတဲ့နေရာတွေကတော့ part 23 မှာရေးထားတဲ့ key တစ်ခုချင်းစီအောက်မှာရှိနေတဲ့ Sub key တွေ အောက်မှာ သွားသိမ်းဆည်းထားတာပါ။
ဒါကတော့ registry မှာ တစ်ကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ hive (subkey) တွေရဲ့ Location ပါ။
What Is Cyber Forensics Part (25)
Window Registry Analysis Part (3) (Window Forensics)
User ၀င်ရောက်တဲ့ အချိန်ကနေ
လုပ်ဆောင်သမျှ ချိတ်ဆက်သမျှကို Registry ကနေ မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတာ Part 23 မှာဖော်ပြပြီးပါပြီး ... ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာနည်းနည်းကြည့်ရအောင်ပါ ...
User တစ်ယောက်က Login ၀င်ဖို့အတွက် Username Password ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ရိုက်လိုက်တဲ့ User name ဟာ Registry ထဲက SAM မှာရှိတဲ့ User name နဲ့ တူမတူ တိုက်စစ်ပါတယ်။ Password ကနေ hash generate လုပ်ပြီး SAM ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ hash နဲ့တူမတူတိုက်စစ်ပါတယ်။
တိုက်စစ်ပြီးတာနဲ့ တူတယ်ဆိုရင် Window ACL ကနေ အခု login ၀င်တဲ့သူဟာ administrator လား သာမန် User လား Guest Account လား ဘယ်အဆင့်လဲဆိုတာ ခွဲခြားပါတယ်။
Domain User (AD system) ဆိုရင်တော့ Username အစား Security Identifiers (SIDs) အနေနဲ့ မှတ်သားထားပါတယ်။ ပြီးရင် ရိုက်လိုက်တဲ့ user name ဟာ HKEY_LOCAL_MACHINE\_Software\_Microsoft\_WindowsNT\_CurrentVersion\_Profilelis ထဲမှာ ရှိတဲ့ SIDs နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ကြည့်ပါတယ်။ ကျန်တဲအဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ Password နဲ့ ACL တိုက်စစ်တဲ့ အပိုင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။
User Login pass or fill ဖြစ်တာတွေကို Registry မှာပဲ Event Log အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။Security, Software , Hardware warning ပိုင်းကိုလဲ Event log မှာကြည့်နိုင်ငါတယ် ...
User က Login ၀င်ပြီးတာနဲ့ ဘာ Service တွေ Run မယ် ဘယ် Application တွေက စမယ်ဆိုတာကို Auto Start လုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းပါ (Malware အရှိနိုင်ဆုံးအပိုင်းတွေပါ)
User က Login ၀င်ရောက်ပြီးတာနဲ့ Wireless or Lan ချိတ်ဆက်မယ် ဆိုရင် ချိတ်ဆက်တဲ့ SSID Name , DHCP or Static , DNS, စတာတွေကို Computer\_HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows NT\_CurrentVersion\_NetworkCards
အောက်မှ သိမ်းဆည်းထားလိုက်ပါတယ်။ (Volatile information ပါ)
Live System (power on ) နေတဲ့ အနေအထားမှာ ဒီအပိုင်းကို စစ်ဆေးရမှာပါ ။
Portable Device တွေ ကွန်ပျူတာမှာ တွဲလိုက်မယ် ဆိုတာနဲ့ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ် Device (Serial No) , Device Name ကဆိုတာ မှတ်သားထားပါတယ်။
User ဟာ ကွန်ပျူတာမှာ Firefox Browser ကိုသုံးတာနဲ့ အသုံးပြုတာကို
HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Mozilla\_Firefox မှာ မှတ်သားထားလိုက်ပါတယ်။
User တစ်ယောက် လုပ်တောင်မှုထဲက အများဆုံးတွေကို
User နောက်ဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့မျှတွေကိုတော့
HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Search မှာ မှတ်သားထားပါတယ်။
User ဟာ Software တစ်ခုကို Install လုပ်လိုက်တာနဲ့
Registry ပိုင်းအနေနဲ့တော့ လုပ်ဆောင်တာတွေ ကျန်ပါသေးတယ် ..
Registry ထဲမှာ မှတ်သားထားတာတွေကို Power on အနေအထားမှာ မှတ်သားတာတွေရှိပြီး power off အနေအထားတို့မှာဆက်လက်မှတ်သားထားတာတွေလဲရှိပါတယ် ...